Chii chandinoita kana ndikawana katsi pamusuwo wemba yangu? Zvinoreva | Noti Katsi
Zvakamboitika kwauri here kuti pawakangosvika kumba wakasangana nekatsi, kana kuti iwe wanga wakanyarara uchiona terevhizheni uye kamwe kamwe iwe wakatanga kunzwa meow padyo uye pawakavhura musuwo wakaona ine furry? Kana zvirizvo, zvirokwazvo une kusahadzika nezve zvekuita nazvo, handiti?
Inogona kunge yakarasika, yakasiiwa, kana ine nzara. Tichaona qué ita kana ndikasangana nekatsi pamusuwo wemba yangu.
Munyika yatiri kugara, uye nekuda kwenzira yatinogara, katsi dzakawanda uye dzakawanda dzinomanikidzwa kutsvaga chikafu chavo mumugwagwa. Zvinowanzofungidzirwa kuti mhuka idzi dzinotoziva hunyanzvi hwekuvhima kubva pazuva rekuzvarwa uye saka hazvifanire kuvaomera kuwana chikafu, asi izvi handizvo.
Hapana munhu anozvarwa achiziva. Kuti vadzidze, vanoda amai vavo kuvadzidzisa, asi izvi hazvisi nyore zvakare: kana amai iri katsi yakagara ichigara nevanhu uye yakaguma yasiyiwa, ichave neyakaoma kuvadzidzisa, kuitira kuti katsi dzinorumurwa, ivo havazove neimwe sarudzo kunze kwekudzidza vega.
Tichifunga izvi, nzara ndechimwe chezvikonzero zvikuru nei uchigona kuwana katsi pamusuwo. Mushure mekutsvaga mumabhini emarara uye asina chaakawana, achasarudza kubvunza vanhu. Zvisinei, haisi iyo chete.
Chimwe chikonzero ndechekuti iyo katsi ndiyoé kutsvaga amai vake, kana zvinopesana. Munyika yemugwagwa, uko kune njodzi dzakawanda, mhuri dzekatsi dzine dambudziko rakawanda kuenda kumberi. Kana iwe uchinzwa kati kana kitten meow, ingangove iri kutsvaga ingave vana vavo kana amai vavo, vachikumbira kutariswa kwako. Panyaya yakaipisisa, anogona kunge achikumbira rubatsiro rwekukurumidza mushure mekumhanyiswa.
Uye kana chiri chando, uye iwe uri munzvimbo inotonhora, unogona meow pamberi pesuo rako kuti uwane pekugara. Hongu, katsi dzinotonhora zvakare, uye kana dzikasawana pekuzvidzivirira dzinogona kufa. Naizvozvo, kana iwe usiri kuda kuva nayo pamba, asi iwe uchida kuita chimwe chinhu kuti ubatsire, unogona kuirega ichipinda mugaraji - chero bedzi yakachena uye makemikari asiri asvikika-, kana kugadzira imba yacho uye ugare nayo nemagumbeze.
Nzira yekukwezva kati yakarasika
1 Chii chaungaita kuvabatsira?
2 Zvinorevei kana kati ikaonekwa pamusuwo wako wepamberi?
2.1 Katsi yakarasika
2.2 Katsi yemusango
2.3 Katsi yemahara
3 Zvikonzero nei kati ingaratidze pasuo rako
4 Matanho ekutora kana kati ikaonekwa pasuo rako
4.1 Imusango here kana mugwagwa?
4.2 Tarisa uone zviratidzo kuti iine muridzi
4.3 Ko kana iwe ukatadza kuwana muridzi?
4.4 Govera chikafu nepekugara
4.5 Tarisa uone zvirwere uye umubaye jekiseni kun'anga
4.6 Gadzirira imba yako
Chii chaungaita kuvabatsira?
Unogona kuita zvinhu zvakati wandei, zvinova:
Chengeta: kana iri katsi kana katsi inoita kunge inofambidzana, ndiko kuti, inoswedera kwauri uchitsvaga caress, unogona kuichengeta mumba. Ehe, zvakakosha kuti zuva rinotevera, kana ave nani, iwe enda naye kun'anga kuti uone kana aine microchip, izvo zvinoreva kuti ane mhuri. Kana iwe usina imwe, zvinokurudzirwa kuti utumire zvikwangwani kwemazuva gumi nemashanu munzvimbo ye "Yakawanikwa Katsi", nefoni yako kana paine munhu ari kuitsvaga.
Mupe chikafuKana iwe usiri kuda kana kusakwanisa kuichengeta, unogona kugara uchimupa chikafu nekumwa mukona yakachengetedzwa kubva kunotonhora, kunaya uye yakananga zuva. Achazvikoshesa.
Tora iye kuti atore: Ndinoziva mushe kuti katsi dzakarasika dzinofanirwa kuve basa remasipareti, uye kuti vanofanirwa kugadzira yemahara spay uye neuter mishandirapamwe kakawanda kupfuura zvavanoita, asi parizvino tinofanirwa kugadzirisa dambudziko remukadzi mukuru-wevanhu kana kutidzora: vanhu . Naizvozvo, kana uchikwanisa kuitenga uye, pamusoro pezvose, kana uchida, zvinokurudzirwa zvikuru kuti katsi itemerwe, angave ari murume kana mukadzi. Varapi vemhuka vanowanzoita mutengo wakakosha kana iri katsi yakarasika.
Zvinorevei kana kati ikaonekwa pamusuwo wako wepamberi?
Kana rimwe zuva ukaziva kuti une katsi pamusuwo pako isingamise kumira, moyo wako unogona kunyevenuka. Katsi dzinogona kusiya kwavo kwese kwekugara uye vauye kumba kwako nekuda kwezvikonzero zvinoverengeka. Usati wava nekatsi nyowani, eIzvo zvakakosha kuti uzive chiikakitsi rudzii uye kana akachengeteka kumugamuchira mumba mako.
Haasi ese katsi anowoneka pamusuwo wako anozove zvipfuyo zvemumba izvo zvangorasika. Iwo matatu mapoka ekati anogona kuva: kurasika katsi, mhuka yemusango kana yemahara katsi.
Iyi katsi katsi yekumba uye inogona kunge iine muridzi. Tarisa uone kana iine chip, kana chishongo kana chimwe chinhu chinogona kuziva kuti chine muridzi. Asi, mune dzimwe nguva, anogona kunge aine microchip pasi peganda rake, izvi zvinogona kusimbiswa nachiremba. Kunyangwe aigonawo kunge aine nhamo yekusiiwa neyaimbova mhuri yake uye Akakuwana nekuti anoda kuve mumwe wako.
Katsi yemusango haisi yepamba kana kupusa. Haana kujaira kugara nevanhu uye nekudaro anogona kuve nehunhu hwakanyanya. Kunyangwe ukamutendera kuti apinde mumba mako, haazogadziri zvakanaka kuti agare mukati memba.
Mhando yekatsi iyi inogona kupingika, inowanzozvarwa mumarara inochengetwa nevanhu vanochengeta chikafu chayo pamhepo kana kuti inogona kunge yakasiiwa uye ichitsvaga hupenyu.
Zvikonzero nei kati ingaratidze pasuo rako
Katsi inouya pasuo rako inogona kureva zvinhu zvakati wandei:
Kuda kuziva:Katsi muongorori uye chimwe chinhu chiri padyo kana mukati memba yako chingabata.
Nyore: Kana vaine chikafu nemvura padhuze nepamba pako, vanogara vakagara vakakomberedza nzvimbo iyoyo vakaturikidzana
Chengetedzo:Kana aine nzara, achitonhora, aine nyota kana achingoda nzvimbo yekutizira, anogona kunge ari kukubvunza ...
Kutenda mashura: Kune vamwe vanofunga kuti pakaonekwa katsi mumba mako "out of nowhere" zvinogona kureva mhanza kana nhamo.
Matanho ekutora kana kati ikaonekwa pasuo rako
Imusango here kana mugwagwa?
Kana iri katsi yakatsauka, yakapfava kana ine muridzi, inopinda mumba mako pasina matambudziko. Katsi yemusango inosarudza kugara panze. Kana kati isingade kupinda, usangoimanikidza nekuti inogona kuita hasha. Iwe zvirinani kumutengera chikafu kana kuwana trust yake iye asati apinda mumba mako.
Tarisa uone zviratidzo kuti iine muridzi
Tarisa uone chero zviratidzo zvingangove zvine muridzi: chishongo, chip, nezvimwe. Chero zano rekuti ndere munhu. Kana uine dzimwe mhuka dzinovaraidza, usadzitendera kuti dziungane pamwechete kudzivirira hutachiona hunogona kuitika kana zvirwere. Kana iwe uchifunga kuti haina muridzi, tora uende nayo kuna vet kunoongororwa hutano. Kana iine chip, ruzivo rwemuridzi runobuda uye iwe unogona kuridzorera kwaari.
Ko kana iwe ukatadza kuwana muridzi?
Kana iwe usingakwanise kuwana ID yemuridzi, usafunge kuti katsi haisi yemunhu. Usati waigamuchira seyako, ita nepaunogona napo kutsvaga varidzi. Iwe unogona kubvunza uchitenderedza dzimba kana kuisa mapepa. Ehezve, kana mumwe munhu akakufonera achiti katsi ndeyavo, vanofanirwa kukuratidza humbowo kuti vaone kuti zvavanotaura ichokwadi uye hausi iwo mukana wekuwana katsi ine hushamwari.
Govera chikafu nepekugara
Govera katsi chikafu, mvura uye pekugara kuitira kuti vanzwe kunakidzwa kuve padivi pako. Paanowana chivimbo chakanyanya, angangoda kuve mumwe wemhuri yako. Nekuti rangarira kuti mune iyi kesi, iwe hauna kumusarudza, iye ndiye akakusarudza iwe kutanga!
Tarisa uone zvirwere uye umubaye jekiseni kun'anga
Paunenge iwe wafunga kuchengeta katsi, wobva wamutora wadzokera kuna vet kubata majekiseni uye kunyangwe kumuita kuti asavhariswe kana kubviswa kana iwe uchiona zvakakodzera. Chiremba wemhuka anokupa rairo dzakanakisa dzekuchengetwa kwavo vachifunga nezvehutano hwavo.
Gadzirira imba yako
Pamusoro pekumubaya nhabvu uye kunetseka nezve hutano hwake, uchafanirwa kugadzirira imba yako kuitira kuti kati yako nyowani ifare padivi pako. Gadzira mubhedha wake, yake marara bhokisi, chikafu chitsva nemvura uye umupe rudo rwako rwese pese paanokumbira.
Ndinovimba chinyorwa ichi chave chinobatsira kwauri? .
Yakazara nzira kuchinyorwa: Noti katsi » Katsi » Curiosities » Chii chandinoita kana ndikawana katsi pamusuwo wemba yangu?
Zvakandibatsira nekuti kamwe husiku ndakasangana nekatsi kadiki kaiva kumucheto kwemba yangu, ndakaenda kunorara uye mangwana acho ndakakumbira vabereki vangu kuti tigare asi vakaramba vakanditi nditsvage. google zvandaigona kuita uye zvinopesana neizvi. Ndakamudyisa, kumuchengeta, kumupuruzira, kutamba naye… uye zvino handina dambudziko.”Kunyangwe kubva panguva iyoyo zvichienda mberi ndakaona kuti ndaida kuva utiziro hwemhuka kuti ndiponese hupenyu hwemarudzi ese emhuka. ??????
Pindura kune gem ???
Ndiri kufara kwazvo kuti chinyorwa ichi chakabatsira kwazvo kwauri so
Maria Victoria Luna akadaro
Katsi yeorenji yakapinda mumba mangu, dzimwe nguva yaigara muhwindo kana pamberi pesuo. Haatsvage chikafu, ane vanopfuura mumwe muridzi, ndivo vavakidzani vangu mhiri kwemugwagwa. Ndamupa chikafu iye haafarire. Handinzwisise…
Pindura María Victoria Luna
Mhoro Maria Victoria.
Zvinogona kunge kuti ari kungoda imwe kambani, kana kuti iye anoda kutarisa pamba pako kana nharaunda
Zvisinei, ini ndinokurudzira kuti utaure nevavakidzani vako kuti uone kana paine chinoitika kwavari.
Ndatenda neruzivo. Ndinongoda kutaura kuti sarudzo yekudzivirira kittens hadzi inoita seyakanaka kwandiri kuitira kuti pasave nekiti mumigwagwa, zvisinei, katsi dzechirume dzinzvimbo uye dzinorwa nedzimwe katsi kudzivirira nzvimbo, uye chiremba wemhuka akandiudza izvozvo kana ndichiitwa akaraswa vanove vakadzikama saka havachazvidziviriri kana vachirwa nedzimwe kati uye vanogona kukuvara. Zvingave zvinonakidza kana iwe ukataura pamusoro penyaya iyi pane imwe nguva. Ndatenda.
Chokwadi. Muchokwadi, vet akandiudza chinhu chimwe chete kamwe. Asi hazvirevi kuti havazvidzivirire, asi kuti vanova nerunyararo kutaura.
Ndatenda zvikuru nekupindura. Ichokwadi ichabatsira mumwe munhu.